Aqoonsigeenna run iyo micnaheena
Maalmahan dambe badanaa waa kiiska inaad magac u sameysatid naftaada si aad muhiim ugu noqoto dadka kale iyo naftaada. Waxay umuuqataa in dadku ay ku jiraan raadis aan la qiyaasi karin oo ku saabsan aqoonsiga iyo macnaha. Laakiin Ciise mar hore ayuu yiri: - Kan naftiisa helaa waa lumin doonaa, oo kan naftiisa helaa waa lumin doonaa. oo kan naftiisa u lumiya aawaday waa heli doonaa (Mt 10:39). Kaniisad ahaan, waxaan ka baranay runtaan. Laga soo bilaabo 2009 waxaa naloogu yeeraa "Grace Communion International" oo magacani wuxuu tixraacayaa aqoonsigeenna runta ah, kaasoo ku saleysan Ciise oo aan annaga ku jirin. Aynu si dhow u eegno magacan oo aan ogaano waxa ku dhex qarsoon.
Nimco waa ereyga ugu horreeya magaceena maxaa yeelay waxay si fiican u qeexeysaa shaqsigeenna iyo safarka aan isla wadaagno ee xagga Ciise Masiix xagga Ruuxa Quduuska ah. Hase yeeshe, waxaan aaminsanahay nimcada Rabbi Ciise inaynu ku badbaadi doonno iyaga iyo sidoo kale ”(Falimaha Rasuullada 15:11). Waxaynu nahay “xaq uma lihin nimcadiisa nimcadiisa xagga madaxfurashada xagga Ciise Masiix” (Rooma 3:24). Nimco keligiis ah, Ilaah (wuxuu inoogu marayaa Masiixa) wuxuu na oggolaanayaa inaan ku wadaagno xaqnimadiisa. Baybalku had iyo goor wuxuu ina barayaa in fariinta iimaanku ay tahay farriin ku saabsan nimcada Ilaah (eeg Falimaha Rasuullada 14: 3; 20, 24; 20, 32).
Doonistiisa waxaa lagu qeexay nimco iyo madax furasho. Rasuul Bawlos wuxuu soo qoray kuwa soo socda: “Ma tuurayo nimcada Ilaah; maxaa yeelay, haddii xaqnimo sharciga laga helo, Masiix micnela'aan buu ku dhintay (Gal 2:21). Bawlos wuxuu ku tilmaamay nimcada Ilaah inay tahay tan kaliya ee uusan rabin inuu tuuro. Nimco ma aha wax la miisaami karo, la cabiri karo, lana tacaali karo. Nimco waa wanaagga nololeed ee Eebbe ee uu ku raacdo qalbiga iyo maskaxda aadanaha oo labadoodaba is beddelo.
Wehelnimadu waa erayga labaad ee magacayaga ku jira, maxaa yeelay waxaan xiriir dhab ah la leenahay Aabbaha xagga wiilka xagga wadaagista Ruuxa Quduuska ah. Masiixa dhexdeeda waxaan ku leennahay wehel run ah oo aan la leenahay Ilaah iyo midkeenba midka kale. James Torrance ayaa sidan u dhigay: “Saddexmidnimada Eebbe wuxuu ku abuuraa jaaliyad sidan oo kale inaan noqon karno dad dhab ah haddii aan ka helnay aqoonsigeenna bulshada dhexdeeda isaga iyo dadka kaleba.” Ilaaha nimcada leh, bogga 74).
Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ahi waxay leeyihiin wehelnimo kaamil ah oo Ciise wuxuu ku baryey in xertiisu wadaagaan xiriirkan iyo inay tan ka tarjumaan adduunka (Yooxanaa 14:20; 17:23). Rasuul Yooxanaa wuxuu ku sharaxay bulshadaan inay jacaylku salka ku hayaan. Yooxanaa wuxuu jacaylkan qotada dheer ku tilmaamay xidhiidhka weligiis ah ee lala yeesho Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Xiriirka dhabta ahi wuxuu ka dhigan yahay kuwada noolaanshaha Masiixa jacaylka Aabbaha xagga Ruuxa Quduuska ah (1 Yooxanaa 4: 8).
Waxaa had iyo jeer la sheegaa in ahaanshaha Masiixiyiintu tahay xidhiidh shaqsiyeed lala yeesho Ciise. Baybalku wuxuu adeegsanayaa dhowr tusaale oo uu ku sharraxayo xiriirkan. Mid wuxuu ka hadlayaa xiriirka sayidkiisa iyo addoonkiisa. Laga soo bilaabo tan, waxay raacaysaa inaan sharfanno oo raacno Rabbigeenna Ciise Masiix. Ciise wuxuu xertiisii ​​sii waday oo yidhi: Hadda wixii hadda ka dambeeya idinku odhan maayo inaad addoommo tihiin; maxaa yeelay, addoonku garan maayo wuxuu sayidkiisu sameeyo. Laakiin waxaan kuu sheegay inaad saaxiibo tihiin; maxaa yeelay waxaan aabbahay ka maqlay wax walbaba waan kuu ogeysiiyey ”(Yooxanaa 15:15). Sawir kale wuxuu ka hadlayaa xiriirka aabaha iyo carruurtiisa (Joh 1, 12-13). Xitaa sawirka aroosadda iyo aroosadiisa, oo horey looga heli karay Axdiga Hore, Ciise ayaa adeegsaday (Mt 9, 15) iyo Bawlos wuxuu wax ka qorayaa xiriirka ka dhexeeya ninka iyo afada (Efesos 5). Xarafka Cibraaniyada xitaa wuxuu sheegayaa in annagoo ah Masiixiyiin aanu nahay walaalo Ciise (Cibraaniyada 2:11). Dhamaan sawiradaan (Addoon, Saaxiib, Cunug, Xaaskiisa, Walaasha, Walaal) waxay wataan fikirka beel qoto dheer oo qoto dheer oo midba midka kale kaashanayo. Laakiin kuwan oo dhami waa sawiro. Saddex-geesnimadeenna Eebbe ayaa ah isha iyo runta xiriirkan iyo bulshada. Waa beel uu si deeqsinimo leh nagula wadaago naxariistiisa.
Ciise wuxuu ku baryay in aynu isaga weligiis la joogno oo aan ku faraxno wanaagan (Yooxanaa 17:24). Tukashadani wuxuu nagu casuumay inaan kuwada noolaano qayb ka mid ah bulshada midba midka kale iyo aabaha. Markuu Ciise jannada kor u qaaday, wuxuu ina qaatay asxaabtiisii, oo wuxuu ku dhex qaatay degmada Aabbaha iyo Ruuxa Quduuska ah. Bawlos wuxuu leeyahay qaab ayaa loo marayaa Ruuxa Quduuska ah oo aan u fadhiisanno Masiixa iyo aabaha hortiisa (Efesos 2: 6). Waxaan horey u arki karnaa xiriirkan aan la leenahay Ilaah, xitaa haddii buuxinta xiriirkan uu muuqan doono oo keliya marka Masiixu soo laabto oo uu aasaaso xukunkiisa. Taasi waa sababta ay beeshu qayb muhiim ah uga tahay beesheena caqiidada. Aqoonsigeenna, hadda iyo weligiisba, wuxuu ku aasaasnaa Masiixa iyo bulshada uu Eebbe wadaagayo sida Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah.
Caalami ah (caalami ah)